Introduction Of Digital Marketing – BYAMASO Articles
Unique Articles Website In Myanmar
Huaman Resources Management
April 24, 2018 Introduction Of Digital Marketing
April 24, 2018 SWOT Analysis ဆိုတာ ……..?
April 24, 2018 PESTLE ဆိုတာ……?
Kaung Thant Sin
ကျွန်တော်တို ဟာနေ့ စဉ် မိုးဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ကင်းကွာလို့မရ၊ Laptop နဲ့ အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ မခွာနိုင်တဲ့လူနေမှုပုံစံကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ လူတွေရဲ့ နေထိုင်မှုပြောင်းလဲသကဲ့သို့ Marketing ပြုလုပ်ပုံတွေဟာလည်း တစ်မူထူးခြားဆန်းသစ်လာရပြန်ပါပြီ။ အခုအချိန်ခေတ်အစားဆုံးကတော့ ခေါင်းစဉ်အတိုင်း Digital Marketing ပါ။ Digital Marketing ဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်းသို့ ဝန်ဆောင်မှု များကို နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ၀ယ်သူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ကြော်ငြာခြင်း ၀ါ မားကတ်တင်း ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တစ်ချို့သောသူတွေက Radio တီထွင်သူ Guglielmo Marconi ပထမဆုံး Digital marketer လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ၁၉၇၁ခုနှစ်တုန်းက ပထမဆုံးကြော်ငြာ ကိုယ့်အီးမေးလ်ကို ပို့ ခဲ့သူ Ray Tomlinson လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာတော့ Yahoo! ပေါ်ပေါက်လာပြီးလူတွေကအကြာင်းအရာတွေကိုအင်တာနက်မှာစတင်ရှာဖွေနေကြပါပြီ။ နောက်ပိုင်း Search Engine အမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာလူတွေဟာ SEO ( Search Engine Optimization ) ကိုစတင်ပြောလာကြပြီး SEO အသုံးပြု၎င်းတို့ Website တွေကို Search Engine တွေမှာပေါ်အောင်လုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်လာပါပြီ။ ၁၉၉၈ မှာတော့ Search Engine ဘီလူးကြီးဖြစ်တဲ့ Google မွေးဖွှားလာပြီး အခုချိန်ထိ လူအသုံးအများဆုံး Search Engine အဖြစ် ယနေ့ အချိန်ထိရှိနေဆဲပါ။ ၂၀၀၀ခုနှစ်မှာ Google က AdWords ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီး လုပ်ငန်းတွေကလည်း၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကြော်ငြာလာကြပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာတော့ Internet Marketing ပြုလုပ်မှုဟာ $3 ဘီလီယံထိရှိလာပါပြီ။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ Youtube နဲ့Google Analytics ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာတော့ Amazomရဲ့ ရောင်းရငွေ $10 ဘီလီယံထိရှိလာပြီး၊ Twitter ဟာလည်းအရေးပါတဲ့ Social Media ဖြစ်လာပါပြီ။
Digital Marketing အသုံးဝင်ပုံ
Digital Marketing ဟာ အလွန်ထိရောက်တဲ့ Marketing နည်းဖြစ်တယ်လို့ Professional Marketer တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ ဥပမာ – သင်က Shoes လို့ Facebook မှာရိုက်ရှာထားရင်သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ Shoes ရောင်းတဲ့Online Shopping ရဲ့ ကြော်ငြာတွေသင်တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ Facebook ကသင်ရဲ့ အကြိုက်ကို Data Storage လုပ်ထားပြီး လုပ်ငန်း တွေကိုကြော်ငြာတဲ့ နေရာမှာပြန်လည်အသုံးချပါတယ်။ အလားတူ Google နဲ့အခြား Social Media Network တွေကလည်း ထိုနည်းအတိုင်း မဟုတ်ရင်တောင်သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ကြော်ငြာရှင်တွေရဲ့ ကြော်ငြာတွေ ကိုသင်တွေ့ နေရဦးမှာပါ။
ယခုဆောင်းပါးသည် BYAMASO Articles ၏ မူပိုင်ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ အခကြေးငွေရလိုမှုဖြင့်ကူးယူခြင်း၊ တဆင့်ရောင်းခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာ၊ Websiteနှင့် Social Mediaတို့ တွင်ဖြန့် ဝေခြင်းများတွေ့ ရှိပါက Myanmar Copyright Act ဖြင့်အရေးယူမိဖြစ်ပါသည်။
ပညာရေးရည်ရွယ်ချက် ကျောင်းစာသင်ကြားခြင်း၊ Assignment Paper တို့တွင် အသုံးပြုလိုပါက admin@byamaso.com သို့ မေးလ်ပို့ ကာ Citation ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံနိုင်ပါသည်။